မောင် က ပြောတယ် Fb ပေါ်တက်ပြီး အလှုကြီး ပေး နေတာလားတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ…. – Shwe Naung
ရှင်ယွန်းမြတ် ကတော့ အမိုက်စားကောက် ကြောင်းအလှတွေ ညို့ အားပြင်းတဲ့ အကြည့်တွေ နဲ့ အသားပေး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်
ပရိသတ် တွေကြား နာမည်ကျော် ရေပန်းစား နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SEXYမော်ဒယ် တစ်ယောက်ပီပီ သူမရဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင်လေးနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ နေရာ တစ်နေရာ ရယူနိုင် သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်စ်နဲ့ ပုရိသတွေ ရင်မခုန်ဘဲ မနေနိုင် လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု အားပြင်းတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်က အခုလည်း ပရိသတ်တွေ ကြွေကျ သွားအောင် ပုံစံ တစ်မျိုးနဲ့ ဖမ်းစားလိုက် ပြန်ပါတယ်။
မြန်မာ ဆန်ဆန်လေး ဝတ်ကာ ကျစ်လစ် တော့င့်တင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရား တွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ပုံလေးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ အခါခါ ပြန်ကြည့် ချင်မိအောင် အပြတ် လန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ဖက်ရှင် ပုံလေးတွေ ကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ် သက်ကြမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင် က ပြောတယ် Fb ပေါ်တက်ပြီး အလှုကြီး ပေးနေ တာလားတဲ့..😅ကျမ မှာ မောင့် ကိုချစ်လို့ မတင်ပဲ ဥ လိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေမှ အများကြီး 😜တခါတလေ အလှုကြီးပေးပေမယ့် ကြည့်ခွင့်ရှိပြီး ထိခွင့် မပေးတဲ့
မောင့်ရဲ့ ရှင်ရှင်လေးပါနော် ပရိသတ်တွေကြားမှာ နောက်ပိုင်း ရေပန်းစား လူကြိုက်များတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။ ကဲ..ချစ် ပရိသတ်တွေအတွက် ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ ပုံလေးကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရဲရဲ တောက် ANGEL ကြယ်စင် အာဇာနည် သူရဲကောင်းမလေး အတွက် ဝမ်းနည်း စကားဆို လိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း….
သားကြီး Jack Jackရဲ့ ပုံလေးတွေ ကို ‌‌‌ဝေမျှပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း……….